SEBENZISA I-IPAD YAM EMSEBENZINI UKUZE NDENZE IZINTO - ITEKNOLOJI
Sebenzisa i-iPad yam emsebenzini ukuze ndenze izinto
Inqaku lomhleli: Eli nqaku lithetha malunga neapps ezimbini, Inqaku kwaye OmniFocus ye-iPad . Nangona umbhali esebenzisa ezi zinto ukwenza umsebenzi wenziwe, ezi ayizizo kuphela iiapps ezinokusetyenziselwa ukuvelisa ukusebenza nge-iPad.
Xa i-iPad yayiqala ukukhutshwa itekhnoloji yeendaba yayibeka njengesixhobo sokusebenzisa kuphela. Oku ikakhulu bekwenza ukungabikho kokufaka okukhawulezayo oya kuthi uqhele ukufumana kwikhompyuter yencwadana enebhodi yezitshixo. Igalelo lescreen sokuthinta kwi-iPad yinto engathandekiyo, ubuncinci ekuqaleni, kodwa emva kweentsuku neeveki ezimbalwa igalelo alikho mbi kangako. Ungayichazanga eyokuba unokutshixa ikhibhodi yangaphandle kunye nazo zonke ii-dock ezintsha zekhibhodi kunye neemeko zokungena ngokukhawuleza njengayo nayiphi na ilaptop okanye i-desktop.
Ndisebenza kwivenkile yeWindows kodwa ndisebenzisa iMac, i-iPad, kunye ne-iPhone buqu. Ngenxa yoku ndithanda ukuba zonke iinkqubo zam zisetelwe kwizixhobo zam zeApple kwaye ndiqwalasele Indawo endisebenza kuyo yeWindows imeko . Ekuqaleni, bendizama ukusebenzisa iMac yam ngoko bendinokufikelela kumandla apheleleyo e-OmniFocus, kodwa ngedesika encinci eyongezwe ubunzima ndaye ndagqiba kwelokuba ndizame ukusebenzisa isuti yeMicrosoft yezixhobo zemveliso; OneNote kunye ne-Outlook.
Oko akuzange kuhlale ixesha elide. Ke yayilixesha lokuqesha kuphela uhlobo lwesicwangciso somsebenzi se-iPad.Intengiso
Ngaba esi sixhobo sakha sabonwa njengesixhobo esisetyenziswayo emsebenzini ukwenza izinto zenziwe?
iRome ayakhiwanga ngemini
Elona candelo lililo malunga nokusebenzisa i-iPad emsebenzini bubungakanani bayo kunye nemilo yayo. Ingena ngokugqibeleleyo ecaleni kwebhodibhodi yam ephambili emsebenzini kunye ne-Incase Convertible Magazine Jacket yokuyiphakamisa ukuze ndikwazi ukufaka igalelo kwi-OmniFocus okanye kwiNqaku. Ndingayichitha ngokulula kwaye ndiyibeke ecaleni ukuba ndifuna ukubhala ezinye iimephu zengqondo okanye uyilo lwesoftware kwincwadana yamaphepha.
Ngenxa yobukhulu kunye nemilo ndingayithatha ngokulula ukuya ezintlanganisweni apho ndingafuna ukufikelela kumanqaku eprojekthi okanye izinto ze-ajenda endifuna ukuzisa ngazo. Isebenza kakuhle nakwiintlanganiso zethu zemihla ngemihla; Ndilayisha imiba esele ivele ukusukela kwintlanganiso yokugqibela kwaye ndinokuhamba ngokulula kuyo xa ixesha lilungile.
Andiziva nditshixiwe phantsi ndisebenzisa i-iPad emsebenzini. Andifanelanga ukuba nexhala ngokubhala into phantsi okanye ukuyiprinta kwi-Outlook xa ndifuna ukushiya idesika yam. Ndithatha nje i-iPad kunye nencwadana yam kunye nam.Intengiso
umculo uwenza uzive njani
Ubomi bebhetri beyure ezili-10 kwi-iPad buvumela ukuba busetyenziswe kakhulu imini yonke ngaphandle kokukhathazeka malunga nokufa kuwe. Ngapha koko, ukuba ndisebenzisa nje i-OmniFocus ukukhokela usuku lwam ndingafumana ngokulula iintsuku ezimbini okanye ezintathu kwintlawulo enye. Zama oko ngayo nayiphi na ilaptop.
Ubomi bebhetri ye-iPad bodwa benza ukuba ibe sisixhobo sokugqibela sokuvelisa njengoko ungasigcina ecaleni kwakho imini yonke. Esona sixhobo sinokuthelekiswa nolu hlobo lokusebenza kwebhetri yi-iPhone.
indlela yokwenza umntwana wakho aphumelele ebomini
Oku kuthatha ukuphatheka kunye nobomi bebhetri ye-iPad kwaye ubaphazamise kunye. Ukuba unento onokuhamba nayo naphina apho ikhoyo yonke imini ungayisebenzisa ngokwenyani njengesixhobo sokuthwala yonke indawo, inkqubo yakho ethembekileyo. Kwaye nokuba awukwazi ukubetha indawo ekuhlala kuyo yonke imini, unokuvumelanisa idatha yakho xa usenza njalo.
Sebenzisa i-iPad yam emsebenzini kunye neNqaku kunye ne-OmniFocus ndinenkqubo eyomeleleyo kwaye inokuthenjwa ngokupheleleyo. Inceda ukuba ndenze okungakumbi kwimini yam kwaye indivumele ukuba ndilale njengomntwana ebusuku.Intengiso
Ekuphela kwento esacaphukisayo ne-iPad kukungahambi kakuhle kwegalelo. Andisoze ndide ndiye kuthi i-iPad, ngenxa yokunqongophala kokufakwa okuqinileyo, sisixhobo esisetyenziswayo kuphela, kodwa ndingatsho ukuba igalelo linokuba yinyani yokwenyani. Ndidla ngokusebenzisa kuphela i-iPad ukufaka amanyathelo akhawulezileyo, ukulinda i-fors, njl. Kwakhona, izixhobo ezinje myPhoneDesktop zilungile ukuba unxibelelwano lweWiFi rhoqo kunye nemigaqo-nkqubo ye-IT esemsebenzini.
I-myPhoneDesktop ikuvumela ukuba uthumele isicatshulwa esivela kwidesktop yakho (nokuba yiMac okanye iPC) ngqo kuwe iDevice. Isebenza ngokumangalisayo.
Ewe ungasebenzisa ikhibhodi yebluetooth kunye nokuma kwetyala, into enomdla, kodwa ekubeni ndingumntu othanda iMac Ndifuna ukugcina amava am e-iPad acocekile (unganditshisa kwizimvo). IOS 5 kufuneka icime enye yale nto njengoko i-OS ivumela imbonakalo-mhlaba kunye neefoto zebhodi yezitshixo ezahlulwe zangamacandelo amabini ahlukeneyo kwicala lesikrini. Oku kuvumela ukusetyenziswa kokuchwetheza ubhontsi ngendlela obuya kuyenza ngayo kwiselfowuni enokuthi ikhawuleze kakhulu kwaye uvakalelwe kwindalo emva koko uchukumise ukuthayipha ekufuneka ukwenzile kwimowudi yokuma komhlaba.
lifezekise iphupha lakho
Umsebenzi oqinileyo kunye nesixhobo sobomi
Ke, ngaba i-iPad iphakama ukuba isebenze nayo? Kule nerd, ngokuqinisekileyo. Ngaphandle kweziphene zayo zokufaka, izibonelelo zesixhobo esiphathwayo, esihlala sikhona, esikuyo yonke into yinto nje ekufuneka yenziwe ngabasebenzi abaninzi bolwazi ukongeza imveliso yabo.Intengiso
Andikwazi kuchaza ukuba kungakanani ukusebenzisa i-iPad emsebenzini okundincedileyo ukugcina umkhondo wezinto ezibalulekileyo kunye nokwenza izinto.
Ngaba usebenzisa i-iPad okanye esinye isixhobo sethebhulethi emsebenzini? Ukuba kunjalo, isebenza njani kuwe.
kutheni kunzima ukwenza abahlobo
indlela yokuma ngokukhawuleza
iincwadi eziza kutshintsha ubomi bakho
ngamadoda aneminyaka emingaphi ukuvuthwa
indlela yokufumana amafutha ngokukhawuleza
izinto wonke umntu omdala kufuneka azazi
Umkhwa Uphononongo Lweapp Inkcubeko Umsebenzi Woosomashishini Ukufunda